Abavelisi kunye nabathengisi baseTshayina China | Jiuhe
Ngaphezu koko, ineenzuzo ezibalaseleyo zobukhulu obuncinci, ubunzima bokukhanya, ukuxhathisa kwe-corrosion, indawo egudileyo, ukumelana nokubane, ukuchaneka okuphezulu, iindleko eziphantsi, ixesha elide ukusebenzisa ubomi kunye neendleko eziphezulu ezisebenzayo. ICarbon Steel Zinc Plated Square Nut ilungele indibano yeemoto, ishishini lamandla, ishishini lokwakha iinqanawa, ubunjineli bebhulorho, umatshini wokuvelisa izixhobo kunye nomzi mveliso wokwenza ifenitshala, ushishino lwee-elektroniki, icandelo lezixhobo zombane, izixhobo zonxibelelwano, umhlobiso wokwakha, umatshini oomatshini kunye nombane, Imveliso yokulungisa ukubumba, ishishini lokuhanjiswa kwamachiza onyango, ishishini leAvi, ukwenziwa kwemizila kaloliwe, njl njl. ifumana igama elihle phakathi kwabathengi kwihlabathi liphela ngenxa yokusebenza okuphezulu.
I-Carbon iron Nylon nati ine-acid engcono kunye nokuchasana ne-alkali, phakathi kwayo amandongomane wePVDF alandelwa yi-polypropylene, omabini ane-acid enamandla kunye nokumelana ne-alkali, ngelixa amantongomane e-nylon ene-acid embi kunye ne-alkali xa kuthelekiswa neyokuqala emibini. Ke ngoko, amandongomane e-nylon, ngakumbi amandongomane we-PVDF, asetyenziswa kakhulu kwindawo yokumelana ne-acid kunye ne-alkali kwamanye amashishini e-electroplating.
Gqiba Umbala we-Zinc
Ibakala 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Chwetheza intloko yesikwere
Ukupakisha Iibhokisi zeplasitiki
Singanikezela iisampulu simahla ngaphakathi kweentsuku ezisi-7 ukuba ukubumba kufumaneka / sinesitokhwe, kwaye emva kokuqinisekisa uku-oda, siya kubuyisela isampula umthwalo.
Eyona nto i-ankile yentsimbi ye-engile ye-stainless
ithafa okanye i-zinc plated okanye imnyama
I-DIN GB ISO JIS BA ANSI
Edlulileyo: I-Flange nati
Okulandelayo: Tshixa i-nut